Izixhobo ezisisiseko zeMilo kwi-Illustrator CC
Njengokungagqibekanga, okuphela kwesixhobo esibonakalayo semilo kwiphaneli yezixhobo ze-Illustrator sisixhobo soxande. Ukuba ucofa kwaye ubambe esi sixhobo, ungafikelela kwizixhobo ezifihliweyo ezinje ngeRoundangle exande, iEllipse, iPolygon, kunye nezixhobo zeNkanyezi, eziboniswe kulo mzobo. (Nangona ubona isixhobo seFlare, ayisiyiyo imilo esisiseko.)
Ungasikrazula esi sixhobo ukuze ungafumani iimilo ezifihliweyo kamva. Cofa uze ubambe isixhobo soxande kwaye urhuqe utolo kwicala lasekunene, emva koko ukhulule iqhosha le mouse. Ezi zixhobo ngoku zikwi-toolbar edadayo yasimahla onokuthi uyitsale uye kwenye indawo.
Ukudala iingxande kunye nee-ellipses
Iingxande kunye nee-ellipses zezona milo zisisiseko onokuthi uzenze. (Jonga lo mzobo.) Ukwenza imilo yoxande simahla, khetha isixhobo soxande kwaye ucofe iphepha apho ufuna ukubonakala khona. Emva koko tsala udiagonally kwicala elichaseneyo, tsala imouse yakho umgama ofuna imilo ubungakanani, kwaye ukhulule iqhosha le mouse.
Ungarhuqa uye ezantsi. Wenza okufanayo ukwenza isangqa okanye i-oval ngokusebenzisa isixhobo se-Ellipse.
Cofa uze utsale udiagonally ukwenza imilo.
Emva kokuba wenze ubume, hlengisa ubungakanani bayo kunye nokuma kwayo usebenzisa isixhobo soKhetho. Beka ubume kwakhona ngokunqakraza kwinto ekhethiweyo kunye nokutsala. Yenza umlinganiso kwakhona wento ngokubamba isiphatho kwaye uhlengahlengise ngaphakathi okanye ngaphandle. Ukulungelelanisa amacala amabini kunye, bamba isibambo sembombo. Ukwenza ubungakanani kwakhona bemo ngokulinganayo, Shift + tsala isiphatho sekona.
Sebenzisa isixhobo soSixande esijikeleziweyo
Unokwenza uxande olujikeleziweyo ngokusebenzisa enye yeendlela ezimbini:
Cofa uze utsale simahla ukwenza imilo yoxande ejikelezileyo.
Cofa kwibhodi yezobugcisa kube kanye ukuze uvule ibhokisi yencoko yebhokisi engqukuva, apho ungangenisa khona amaxabiso ukuchaza ubume.
Umahluko phakathi kwezi ndlela zimbini kukuba xa uvula ibhokisi yencoko yababini engqukuva (jonga eli nani), ungafaka ixabiso kwi-Corner Radius text field, emisela ukuba kungakanani ukujikeleza okusetyenzisiweyo kwiimbombo zobume.
Guqula ikona ejikelezileyo ngokubonakalayo ngokucinezela amaqhosha aphezulu naphantsi kwikhibhodi yakho ngeli xesha urhuqa imilo yoxande ejikelezayo kwibhodi yezobugcisa.
Ixabiso lincinci, iikona ziyajikeleza kancinci; ixabiso liphezulu, kokukhona ziyajikeleza iikona. Lumka: Ungarhangqa iikona zoxande kakhulu kangangokuba ibe lilips!
Sebenzisa isixhobo sePolygon
Udala iinkwenkwezi kunye neepoligoni ngendlela efanayo njengoko usenza uxande kunye nee-ellipses. Khetha isixhobo sePolygon kwaye ucofe kwaye utsale kwikona enye ukuya kwenye ukwenza ubume bepholigoni emithandathu emiselweyo. Unokukhetha kwakhona isixhobo sePolygon kwaye ucofe kube kanye kwibhodi yobugcisa ukutshintsha isixhobo sePolygon kwibhokisi yencoko yababini yePolygon.
Ungayitshintsha imilo yepholigoni ngokufaka amaxabiso amatsha kummandla wombhalo weRadius kunye neeSides, njengoko kubonisiwe kumzobo. Irediyasi imiselwe ukusuka embindini ukuya emaphethelweni wepoligoni. Ixabiso lenani lamacala linokuvela kwi-3 (ukwenza oonxantathu umoya ophucukileyo ukuyila) ukuya kwi-1,000. Ngubani-ipholigoni enamacala ayi-1 000 inokujongeka njengesangqa ngaphandle kokuba ibungakanani beTexas!
Sebenzisa isixhobo seNkanyezi
Ukwenza ubume beenkwenkwezi, khetha isixhobo seNkwenkwezi kwiphaneli yezixhobo. (Khumbula ukuba inokuzimela phantsi kwezinye izixhobo zokubumba.) Ukuba ucofa ibhodi yezobugcisa kube kanye ukuze uvule ibhokisi yencoko yababini ye-Star, ubona imihlaba emithathu yokubhaliweyo apho ungafaka khona amaxabiso ukwenza inkangeleko yakho:
Radius 1: Umgama ukusuka kumanqaku angaphandle ukuya kwiziko lenkwenkwezi
Ububanzi 2: Umgama ukusuka kumanqaku angaphakathi ukuya embindini weenkwenkwezi
Amanqaku: Inani lamanqaku aquka inkwenkwezi
Ukusondelana kunye iRadius 1 kunye neRadius 2 amaxabiso omnye komnye, amafutshane amanqaku kwinkwenkwezi yakho. Ngamanye amagama, ungaya kwi-starburst uye kwisitywina sokuvunywa ngokufaka amaxabiso asondeleyo kwiRadius 1 kunye neRadius 2 kwimihlaba yokubhaliweyo, njengoko kubonisiwe kulo mzobo.
Imizekelo ye-cox 2 inhibitors
Ungayinyanga njani i-balanoposthitis
Iziphumo ebezingalindelekanga zevithamini d3
khuphela kwaye uncamathisele kwi-Android
iziphumo ebezingalindelekanga zytiga
indlela yokuthengisa into kwi-craigslist